Iindaba -I-Curcumin ibonakalisiwe yokuphucula iiSerum Inflammatory Markers
Iziphumo zophando olutsha olupapashwe kwiphephancwadi iBiomed Central BMC ibonakalise ukukhutshwa kwe-turmeric yayisebenza njengeparacetamol ekunciphiseni iintlungu kunye nezinye iimpawu zedolo le-osteoarthritis (OA). Uphononongo lubonise ukuba ikhompawundi ayifumaneki yayisebenza ngakumbi ekunciphiseni ukudumba.
I-Osteoarthritis sisifo esiwohlozelayo samalungu adibeneyo abonakaliswa ngokwaphuka kwentlala, ulungelelwaniso oludibeneyo, iigaments, kunye nethambo elingaphantsi. Ukubonakaliswa okuqhelekileyo kwe-osteoarthritis kukuqina kunye nentlungu.
Ngokukhokelwa nguShuba Singhal, PhD, olu phononongo lonyango olungenamkhethe, nolulawulwayo lwenziwa kwiSebe le-Orthopedics ye-Lok Nayak Jai Prakash Hospital / Maulana Azad Medical College, eNew Delhi. Kuphononongo, abaguli abayi-193 abafunyaniswe benesifo samathambo samadolo babengenaxesha lokufumana i-turmeric extract (BCM-95) njenge-500 mg capsule amaxesha amabini ngemini, okanye ithebhulethi ye-650 mg yeparacetamol kathathu mihla le kwiiveki ezintandathu.
Iimpawu zedolo le-arthritis zentlungu, ukuqina ngokudibeneyo, kunye nokunciphisa ukusebenza komzimba kwavavanywa kusetyenziswa i-Western Ontario kunye neMyunivesithi yaseMcMaster iOsteoarthritis Index (WOMAC). Emva kweeveki ezintandathu zonyango, uhlalutyo lomphenduli lubonakalise ukuphucuka okukhulu kumanqaku e-WOMAC kuzo zonke iiparameter ngokuthelekiswa neqela leparacetamol, nge-18% yeqela le-BCM-95 elinika ingxelo yokuphuculwa kwe-50%, kunye ne-3% yezifundo ezichaza ukuphuculwa kwe-70%.
Ezi ziphumo ziboniswe kakuhle kumakishi e-BCM-95 e-serum markers: Amanqanaba e-CRP ancitshiswe ngama-37.21%, kwaye amanqanaba e-TNF-α anqunyulwa ngama-74.81%, ebonisa ukuba i-BCM-95 iqhube ngcono kuneparacetamol.
Olu phononongo lwalululandelelo kufundo lwe-Arjuna olwenziwe ngaphezulu konyaka ophelileyo olwabonisa unxibelelwano oluqinisekileyo phakathi kokwenza i-curcumin yeflegi kunye nokhathalelo lwe-osteoarthritic.
"Injongo yesifundo esikhoyo yayikukwakha kwizifundo zangaphambili ukunika ukucaciswa okungcono kunye nokucaciswa ngokubandakanya amanqaku angaphezulu kunye neendlela ezingcono zokufumana amanqaku," utshilo uBenny Antony, umlawuli olawulayo odibeneyo weArjuna. "Iziphumo ezichasene ne-arthritic ye-BCM-95 kwi-osteoarthritis ibangelwa kukukwazi ukumodareyitha i-TNF kunye neCRP."
Idolo OA ngoyena nobangela uphambili wokukhubazeka kunye neentlungu phakathi kwabantu abadala kunye nabantu abadala. Uqikelelo lwe-10 ukuya kwi-15% lwabo bonke abantu abadala kuneminyaka engama-60 banesidanga esithile se-OA, ngokuxhaphaka okuphezulu kwabasetyhini kunamadoda.
"Olu pho nonongo luqinisekisa kwakhona i-anti-arthritic effect ye-BCM-95 kwaye inika ithemba elitsha kwizigidi zokuphucula umgangatho wobomi," kusho uNipen Lavingia, umcebisi wezinto ezintsha kwiArjuna Natural e-Dallas, TX.
"Sifunda ngakumbi malunga neendlela zokwenza i-curcumin's anti-inflammatory effect esikholelwa ukuba sisiphumo sokukwazi ukuthintela imiqondiso ye-pro-inflammatory, enje nge-prostaglandins, leukotrienes, kunye ne-cyclooxygenase-2. Ukongeza, i-curcumin ibonakalisiwe ukuba icinezela ii-cytokines ezininzi ezichasayo kunye nabalamli ekukhululweni kwabo, njenge-tumor necrosis factor-α (TNF-α), IL-1, IL-8, kunye ne-nitric oxide synthase, utshilo u-Antony.
Ukuhlanganiswa okungafaniyo kwe-BCM-95 kwee-curcuminoids kunye ne-turmerone etyebileyo kwizinto zeoyile eziyiphumezayo imiqobo ye-curcumin ye-bioavailability imiqobo ngenxa yendalo ephezulu ye-lipophilic.